Toe-karena sy tsy fahampian-tsakafo
Toetry ny atmosfera: Mamporisika na mikorontana ny tebiteby
Atmosferatiora tsy mivoatra = tsy marim-pototra
Ny toekarena (na ny fahamarinan-toetran'ny atmosfera) dia manondro ny firoborobon'ny rivotra na mitsangana na mamorona oram-baratra (tsy mieboebo), na manohitra ny hetsika avo lenta (stability).
Ny fomba tsotra indrindra hahatakarana ny fiorenan'ny toetr'andro dia ny maka sary ny rivotra misy sarona matevina sy mavitrika izay mamela azy hanitatra, fa manakana ny rivotra ao anaty amin'ny fifangaroana amin'ny rivotra manodidina-toy ny an'ny bala antoko. Aorian'izay, alaivo sary an-tsaina hoe mandray ny baolina izahay ary manery azy ao anaty rivotra .
Koa satria mihena ny haavon'ny rivotra amin'ny haavony, dia hitatra sy hivoatra ny baolina, ary hihena ny hafanany. Raha mora kokoa noho ny rivotra manodidina ilay fonosana, dia ho mafy kokoa izany (satria mafana kokoa ny rivotra mafana noho ny rivotra mafana); ary raha avela hanao izany dia hilentika amin'ny tany indray izany. Ny rivotra amin'ity karazana ity dia lazaina ho miorina.
Etsy ankilany, raha toa ka nanala ny balon-tsainay izahay ary ny rivotra tao anatin'izany dia nihamafy kokoa, ary noho izany, kely kokoa noho ny rivotra nanodidina azy, dia nitohy hatrany izy mandra-pahatongan'ny fotoana mitovy ny hafanana sy ny manodidina azy. Ity karazana rivotra ity dia voasokajy ho tsy mety.
Lapse Taratra: fitomboana miorina
Nefa ny mpikaroka dia tsy voatery mijery ny fitondran'ny baolina iray isaky ny te-hahafantatra ny fahamarinan'ny atmosfera. Azon'izy ireo amin'ny valinteny iray ihany izy ireo amin'ny famakiana ny mari-pahaizan'ny rivotra iainana amin'ny heva samihafa; Ity fepetra ity dia antsoina hoe ny tahan'ny tontolo iainana (ny teny hoe "mihenoa" izay tsy maintsy atao amin'ny fahakelezan'ny hafanana).
Raha mitombo ny tahan'ny tontolo iainana toy ny marina raha ny rivotra manakaiky ny tany dia mafana kokoa noho ny rivotra iainana - dia fantatry ny iray fa tsy misy ny atmosfera. Saingy raha kely dia kely ny taham-pahavitrihana, midika izany fa kely ny fiovan'ny hafanana, dia manondro tsara ny rivotra iainana.
Ny toe-javatra mivaingana indrindra dia mitranga mandritra ny fiovaovan'ny toetrandro rehefa mitombo ny mari-pana (fa tsy mihena) amin'ny haavo.
Ny fomba tsotra indrindra hamaritana ny fahamarinan'ny atmosfera amin'ny jerenao dia ny fampiasana feo manjelatra.
Navoakan'i Tiffany Means
Ny fomba fianarana amin'ny fanadinana biolojika
Ampianaro ny asanao Chemistry
Ny endrik'izao tontolo izao
Mampiditra solika solifara amin'ny rano ve ve ianao?
Inona no hitranga raha maty ny atmosfera eto an-tany?
Inona no dikan'ny fitaterana ao amin'ny Geology?
Inona ny ala? Fahamarinana sy fiarovana
Biôlôjika sy suffixes: bi-
Inona avy ireo rahona izay toa onjam-peo?
Ireo loharano faharoa amin'ny fikarohana
Ny faniriana manerantany: 'Bon appétit'
Fianarana Baiboly: Manaja ny ray aman-dreninao
MAP vs Pricing MSRP: Ny Heverin'izy ireo, ny fomba ampitahan'izy ireo
Iza no manao ny fiaramanidina tsara indrindra? Indro ny fijery ny Top Fly Rod Makers
Trano Walter Gropius any Lincoln, Massachusetts
Bola any Etazonia
Fianarana ambony lavitra fianarana
"Ireo zazalahy sy zazavavy manaraka"
Ny vatsim-pianarana amin'ny kolontsaina amin'ny daty oktobra
Torolalana ho an'ny Teaj, Fetibe fankalazana ny Hindu ho an'ny vehivavy
Mampiasa ny Geo-Board amin'ny Math
Vavaka ho an'ny Fahaleovantena
Ny firenena be mponina indrindra amin'ny taona 2100
Ireo 7 Teny Fiainana Mahasoa Mampianatra Anao ny Fitiavana ny Fiainana
Alice Freeman Palmer, Filoha College Wellesley
Espaniola amin'ny ririnina